नेपालको अर्थतन्त्र किन सुधार हुन सकेन ? - दुनियाँको खबर
चौबिस घन्टामा सत्ताइससय संक्रमित
नेपालमा बढ्दो क्रममा कोरोना संक्रमण
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकाल प्यानललाई सुदूरपश्चिमबाट ३ दर्जन जिल्ला अध्यक्षहरुको साथ
नेपाल बैंक लिमिटेडद्वारा ८४औं बार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा रक्तदान
Home आर्थिक खबर नेपालको अर्थतन्त्र किन सुधार हुन सकेन ?
नेपालको अर्थतन्त्र किन सुधार हुन सकेन ?
on: १९ भाद्र २०७७, शुक्रबार १०:२०
अर्थतन्त्र आर्थिक कृयाकलापबाट चलायमान हुने गर्दछ । आर्थिक कृयाकलापले गति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र पनि गतिहीन हुन्छ । आर्थिक कृयाकलापलाई जतिसक्दो गतिशिल बनाईन्छ अर्थतन्त्र त्यो भन्दा धेरै गतिले अगाडि बढ्छ । आजका दिनसम्म अर्थतन्त्रका आधारभूत एकाईहरुमा लगानी गर्न विभिन्न ऋण, अनुदान स्वीकारियो तर ति सबै बालुवामा पानी खन्याए सरह बनें । वैदेशिक ऋण र अनुदान अनुमानको आधारमा बजेटको अंश बढाईयो जुन देशको वास्तविक आम्दानी भन्दा बढि हो ।
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष देशको वास्तविक आम्दानी भन्दा बढिको बजेट सार्वजनिक गर्दै आईरहेको छ । देशको आम्दानी भन्दा लगभग ४० प्रतिशतले बढि बजेट सार्वजनिक भैरहेको छ । यो वैदेशिक संघसंस्था वा राष्ट्रले दिन सक्ने ऋणको अनुमानको आधारमा बजेटमा समावेश गरिएको हो । जुन आउँछ पाईन्छ भन्ने कुनै निश्चित नै छैन । बजेट नागरिकमा एक दिने खुसि बाँड्ने फिल्म जस्तो बनिरहेको छ । सुनेको दिनमात्र खुसि । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट हेर्ने हो भने कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड छ त्यसैगरि राजश्व संकलन जम्मा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोडमात्र छ । यसलाई मध्येनजर गर्दा नेपालमा वार्षिक बजेटको अंश ९ खर्ब बराबरको मात्र हुने देखिन्छ । अहिले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा घाटा बजेट आएको छ । सम्भावना कम बोकेका क्षेत्रमा बजेट छुट्याईन्छ एक वर्ष भित्रमा ति सञ्चालनमै आउदैनन् । बजेट रकमान्तर हुदै साधारण तर्फ लगिन्छ । जस्तै ः नेपाल पानीजहाज कम्पनीमा छुट्याईएको बजेट, ग्याँसको पाईप घरघरमा जोड्ने विषयमा छुट्याईएको बजेट । यसलाई विश्लेषण गर्दा बजेट नीतिकै कार्यन्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत प्रक्षेपण बीचको तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पूनःप्राप्ति पश्चात राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन । पाँचवर्षको कार्यकालमा धेरै पटक सरकार परिवर्तन हुँदा नीति र कार्यक्रम पनि सरकार पिच्छे परिवर्तन भए । पार्टीगत अन्तरविरोध बढ्दै गयो । विरोधीको लागि विरोध भन्ने संस्कार बस्यो । नेतागणमा व्यक्तिगत सम्पति बटुल्ने होडबाजी चल्न थाल्यो । गुण्डा हात लिएर वा व्यक्तिगत फाईदाका लागि विदेशि अनुकुलको नीति स्वीकार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरे । जिम्मेवारी, पारदर्शिता, दुरदृष्ट्रि नेताहरुमा नष्ट हुँदै गयो । आर्थिक प्रलोभनबाट चुनाब जित्ने परम्परा बस्यो । कानून सामान्य नागरिकलाई मात्र लाग्ने भयो । कानूनको व्याख्या आफु अनुकुल हुनथाल्यो । सरकारको नराम्रो पक्षको विरोध गर्ने नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्न थाल्यो । उच्च पदस्थ निकायका नियुक्ति पैसामा खरिद बिक्री हुन थाल्यो । नीति निर्माण तहमा आवश्यक योग्यताको कमि रह्यो । नीतिगत÷संगठानिक भ्रष्टचार मौलायो । उद्योग कलकारखानालाई प्रोत्साहन होईन निरुत्साहन गरि वेरोजगारी बढाईयो र विदेशिन बाध्य बनाईयो । विज्ञ विद्धानहरुलाई वेवास्ता गरियो । कमिसनका लागि विदेशि वस्तुलाई प्रोत्साहन गरि आयात गरियो । स्वदेशि वस्तुले बजारै पाएनन् । संसदहरु नै अपहरण, लुट, तस्करी, भ्रष्टचारमा लागि संसदीय मर्यादाको उपहास गरियो । वार्षिक बजेट संसदलाई भाग लगाउने परम्परा स्थापित भयो । पहँुच नहुनेलाई गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा कोटा प्रणाली सृजना गरि प्रशासनिक संरचनालाई निरिह बनाईयो । अदालत, अख्तियार र सुरक्षा निकाय भागबण्डामा आफु अनुकुल बनाईयो संस्थागत निष्ठा चक्नाचुर बनाईयो । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा परिरहेको छ ।
नेपालमा रहेका अधिकांश संस्थाहरु निजीकरणको नाममा बेचियो । धरासायी बनाईयो । वि.सं २०५० अगाडिसम्म ७५ वटा सार्वजनिक संस्था थिए सबै बेचेर हाल ४४ वटा छन जसमा ५ वटा त सञ्चालनमै छैनन् । यो बिचमा उत्पादन र रोजगारीका लागि एउटा पनि ठूला उद्योग खेलिएनन् । भएका उद्योगहरुमा पार्टीगत राजनीति हावी गराइ बन्दगराईयो । गरीबीका नाममा आएको सहयोगबाट आफ्नै गरीबी उन्मुलन गरियो । संरचना निर्माण, निर्माण अवधि बढाई उत्पादन लागत बढाउने जसका लागि ऋण स्वीकारी त्यसैमा पनि भ्रष्ट्रचार मौलायो । जस्तै ः मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना । पहाडी ईलाकामा अनावश्यक बाटो खनी विकासका नाममा विनास निम्त्याईयो । उद्योगी व्यापारीबाट चन्दा असुल्ने परम्पराले वस्तुको बजार भाउ आकाशियो । अनावश्यक करको भार थोपरियो । संघीय गणतन्त्रको नाममा राज्यै राज्य राजै राजा सृजना गरियो । राजाहरुको सेवा सुविधामा बजेटको ठूलो अंश खर्च गरिने वातावरण मिलाइयो । कृषिलाई महत्व दिईएन । योग्यता, क्षमता, सीप र अनुभवको अनादर गरियो । जस्तै ः नेता विरामी हुँदा विदेश जाने प्रचलन ।
देशमा अनियमितता गरि मुद्रा बाहिर पठाउने काम गरि स्वीस बंैक लगायतका बंैकमा जम्मा गर्ने संस्कार बस्यो । देश र जनताका लागि भन्दा पनि आफ्ना फाईदाका लागि विदेशि ऋण अनुदान स्वीकारियो । नाता गोताबाट सरकारी व्यवसाय चलाईयो । लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउँदा ब्याज तिर्न पनि ऋणै लिनुपर्ने अवस्था सृजना गरियो । श्रम निर्यात गरि आएको रेमिटान्समा खुशि मनाउने वातावरण बन्दै गयो । व्यापार घाटा शिखरमा पुग्यो । भुक्तान सन्तुलन ऋणात्मक हुदै गयो विदेशि वस्तुकोे भाउ आफै बढाउन लगाएर स्वदेशि बजारमा चर्को मूल्य बनाईयो ।
यस अवस्थामा उत्पादनमूखि आर्थिक कृयाकलाप भन्दापनि कारोबारीय आर्थिक कृयाकलापले बजार चल्छ । आधारभूत उत्पादन हुदैन । वस्तुको आयात बढ्छ जसका कारण देशको ठूलो पैसा बाहिरिन्छ । चर्को मूल्य र अत्याधिक करको कारण उपभोक्ताको क्रय क्षमता घट्छ । बचत हुदैन, लगानी घट्छ घटेका लगानीले उत्पादन घटाउँछ, उत्पादन नै घटेपछि स्वत रोजगारी घट्न जान्छ । नागरिकहरु परनिर्भर हुनुपर्ने स्थिति बन्छ । उनीहरु निरिह बन्दछन् । राजनीतिक वृतका मानिसहरु तिनै नागरिकहरुलाई कज्याएर श्रम शोषण गरि निरंकुशता लाद्न पुग्छन् । यसले उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दैन । उत्पादन नभएपछि आर्थिक कृयाकलाप साँगुरिन्छ । साँघुरो आर्थिक कृयाकलापले अर्थतन्त्रलाई पनि सुधार हुनबाट रोक्दछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख बनाउन राजनीतिक निष्ठा र ईमान्दारित जरुरी छ । व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थमा समाहित हुनु पर्दछ । सरकार नियन्त्रक मात्र हैन सुविधा प्रदायक, व्यवस्थापकीय नियन्त्रक हुनुपर्छ । सरकारले आफ्नो दायित्व र नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने परिपाटी बसाल्दा आर्थिक कृयाकलापले गति लिन्छ । सरकार बलियो बन्छ र नागरिकमा आत्मा विश्वास बढ्छ ।